မွေးနေ့မှာ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေး လက်ဆောင်တွေပေးကြတဲ့ ချစ်ရတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့တဲ့ ပိုးမမှီသာ - Cele Gabar
မွေးနေ့မှာ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေး လက်ဆောင်တွေပေးကြတဲ့ ချစ်ရတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့တဲ့ ပိုးမမှီသာ
ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်ပိုးမမှီသာကတော့ မနေ့က မေလ (၁)ရက်နေ့လေးမှာမွေးနေ့ကျရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပိုးမမှီသာကတော့ မနေ့က မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှာ အသက် (၂၅)နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပိုးမမှီသာကတော့ မနေ့ကကျရောက်တဲ့ သူ့ရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှာ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးကြတဲ့ ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေ အနုပညာရှင်မောင်နှမတွေ မိတ်ဆွေတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ “Itsawrap of the tremendous 25th birthday today. I felt every love, warmth and support from each and everyone of you near or far.A quarter of life has passed and come on in, I’m ready for more !
ချစ်ခြင်းမေတ္တာများနဲ့ သတိတရဆုတောင်းပေးသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရပါတယ် ” ဆိုပြီး မွေးနေ့လက်ဆောင်တွေအများကြီးရရှိခဲ့ကြောင်း မွေးနေ့လက်ဆောင်တွေနဲ့ အတူ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံလေးကိုပါ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ မျှဝေဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ ပိုးရဲ့ ပုံလေးကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်နော်။
ေမြးေန႔မွာ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းေပး လက္ေဆာင္ေတြေပးၾကတဲ့ ခ်စ္ရတဲ့သူေတြအားလုံးကိုေက်းဇူးတင္စကားဆိုခဲ့တဲ့ ပိုးမမွီသာ
ပရိသတ္ႀကီးေရ ပရိသတ္ေတြရဲ႕အခ်စ္ေတာ္ပိုးမမွီသာကေတာ့ မေန႔က ေမလ (၁)ရက္ေန႔ေလးမွာေမြးေန႔က်ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ပိုးမမွီသာကေတာ့ မေန႔က ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ေလးမွာ အသက္ (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သြားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ပိုးမမွီသာကေတာ့ မေန႔ကက်ေရာက္တဲ့ သူ႔ရဲ႕ ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ေလးမွာ ေမြးေန႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးၾကတဲ့ ခ်စ္ရတဲ့ ပရိသတ္ေတြ အႏုပညာရွင္ေမာင္ႏွမေတြ မိတ္ေဆြေတြကိုေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းနဲ႔ “Itsawrap of the tremendous 25th birthday today. I felt every love, warmth and support from each and everyone of you near or far.A quarter of life has passed and come on in, I’m ready for more !
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ားနဲ႔ သတိတရဆုေတာင္းေပးသူအားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ရပါတယ္ ” ဆိုၿပီး ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ေတြအမ်ားႀကီးရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ေတြနဲ႔ အတူ ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ပုံေလးကိုပါ သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေန မွ်ေဝေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။ CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေရ ပိုးရဲ႕ ပုံေလးကို ျပန္လည္မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
Previous post မင်္ဂလာမော်ကွန်းတင်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနား ပွဲပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေခဲ့တဲ့ အေးသောင်း
Next post ပရဟိတ မျက်မမြင်ပညာသင်ကျောင်းအတွက် မုန့်တွေ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ မေလသံစဉ်